Motivation for success :: ‘जनयुद्ध’ भन्दा ठूलो जोखिम उठाउँदै प्रचण्ड !
‘जनयुद्ध’ भन्दा ठूलो जोखिम उठाउँदै प्रचण्ड !
काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अर्को खोखिम उठाउने भएका छन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डले अब विदेशी शक्ति केन्द्रका विरुद्ध अर्को जोखिम मोल्न लागेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने कदम नचालेको भए उनको शक्ति यतिसम्म कम हुँदैनथ्यो । कटवाल प्रकरणपछि उनले सत्तामात्र छाड्नुपरेन माओवादी कमजोर हुँदै पहिलोबाट तेस्रो शक्ति बन्ने आधार सृजना भयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि त्यही संकेत गरेका छन् । प्रचण्डका लागि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति महत्वपूर्ण बनेको छ । जुनसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
तर, जबरामाथि उक्त मुद्दा अगाडि नबढाएको आरोप छ । यसकारण पनि प्रचण्ड जबराबाट मुद्दा अगाडि बढाएर फैसला पक्षमा पार्ने या बर्हिगमनमध्ये एक चाहन्छन् ।
प्रचण्ड जबरालाई महाभियोग लगाएर सफलता हासिल गर्न सके देशको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बन्नेछन् । उनले फेरि नयाँ राजनीतिक ऊर्जा पाउनेछन् ।
यसमा असफल भए उनलाई कटवाल प्रकरणभन्दा पनि ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । प्रचण्ड यसकारण पनि ठूलो राजनीतिक जोखिमका लागि तयार देखिएका छन् । सम्भवतः यो जनयुद्धपछि अर्को ठूलो जोखिम हुनसक्छ ।